Gabadh Muslimad ah oo ku hammineysa in ay ku biirto baarlamaanka Catalonia | Saxil News Network
Gabadh Muslimad ah oo ku hammineysa in ay ku biirto baarlamaanka Catalonia
December 19, 2017 - Written by editor
Gabadha lagu magacaabo Najat Driouech waxa ay ka mid tahay dadka islaamka ah ee nool gobolka Catalonia ee dalka Spain, waxana ay u sharaxantahay xilka xildhibaanada doorashada dhacaysa dhawaan.
“Waa wax laga murugooda in marka aad tvga fiirsato aadan ku arkaynin wajiyo dad madoow ah ama carab ah” ayay tiri Najat.
“Ma doonayo in caruurtayda ay la kulmaan kala bar wixii ay la kulmeen awoowayaashood iyo rubuc wixii ay la kulmeen waalidkood, waxaan rabaa in ay ku dhex noolaadaan bulsho laga wada tirsanyahay oo loo simanyahay” ayay intaas ku dartay.
Waxa ay asalkeedii ka timid dalka Moroco iyada oo 9 sano jir ah oo waalidkeed la socota sanadkii 1990-kii, waxayna muddo 17 sano u shaqaynaysay dowladda hoose ee magaalada Masnou oo ku taala duleedka magaalada Barcelona.
Waxa ay ololaheeda doorasho waddaa xili lagu gudo jiro qalalaase siyaasadeed oo ka dhashay go’aankii dowladdii xilka laga qaaday ee ahaa in ay ku dhawaaqaan madax banaani.
Hogaamiyaha Catalonia oo soo dhoweeyey madaxbanaanida
Codaynta aftida madaxbanaanida Catalonia oo bilaabatay
Taliyaha booliska Catalonia oo “fallaaganimo” lagu eedeeyay
“Ujeedkayga ma ahan in aan noqdo qofkii ugu horeeyay ee islaam ah ee gala baarlamaanka, ee waxaan rabaa in aan noqdo qofkii koowaad oo dad badan matala” ayay tiri.
Inkasta oo aysan ka mid ahayn xisbi siyaasadeed, haddane waxa ay ogolaatay in ay ku ku tartanto xisbiga ERC si ay ula dagaalanto takoorka.
Xisbigan waxa uu rajo ka qabaa in uu helo aqlabiyadda xubnaha baarlamaanka.
La dagaalanka takoorka
Image captionMuslimiinta Catalonia waa boqolkiiba 15% dadka halkaas ku nool
Catalonia waxaa ku nool 515,000 muslimiin ah , kuwaas oo qiyaas ahaan dhan boqolkiiba 15% dadka gobolkaas.
Najat waxa ay sheegtay in ay u taagantahay in ay ka hortagto takoorka lagu hayo muslimiinta, iyo dhaqanka xun ee siyaasiyiinta Catalonia.
Musharaxa xisbiga Ra’isulwasaaraha Spain ee gobolka ninka lagu magacaabo Xavier Garcia Albiol, kaas oo lagu eedeeyay in uu jeediyay hadalo caadifad ah oo ka dhan islaamka iyo dadka kale, isaga oo yiri “Waxaan nadiifineynaa Badalona” oo ah magaalo ay ku badanyihiin dadka soo galootiga ah.
Najat waxa ay sheegtay in bulshada ay kasoo jeedo ay la kulmaan cunsuriyad, iyada oo xitaa dadka bartay xirfadaha caafimaadka loo diido in ay shaqo helaan.
“Marka aad yartahay oo aad ku hadasho Spanish, dadka waa ku amaanayaan, waana ku jeclaanayaan, balse marka aad soo weynaato oo aad biloowdo in aad dood ka qeybgasho, waxa aad u muuqanaysaa qof tartan ku jira” ayay tiri Najat oo intaas ku dartay in aanan la ogolaan karin in sidii jiilkii hore oo kale ay noqdaan dad nadaafada uun ka shaqeeya iyo xamaaliga.
Daraasad ay sameeyeen jaamacadaha Princeton, Clemson, iyo Miami ayaa lagu ogaaday in jiilka labaad ee dadkii Spain yimid boqolkiiba 20% ay la kulmeen takoor.
Waxaa dadkan u badan kuwa islaamka ah, iyada oo gaar ahaan magaalada Barcelona ay aad u badantahay cabashada laga qabo booliiska.
Dadkii weerarada argagixiso ka geystay magaalooyinka Barcelona iyo Cambrils waxa ay dhammaantood ahaayeen dad qoysaskooda ay kasoo jeedaan dalka Moroco, waxaana duufsaday wadaado xag jir ah.
Maxamed Al Qaaduuni oo ah madaxa golaha muslimiinta ee Spain ee magacooda loosoo gaabiyo UCIDE ayaa sheegay in iskaashi dhexmara dowladda iyo bulshada muslimka ah uu yarayn karo xagjirnimada iyo weerarada.
Waxa ay sheegeen in 82,000 arday oo muslimiin ah ay ku dhigtaan iskuulaadka, balse aysan jirin wax daraaso diini ah oo ay iskuulaadka dowladda ku qaataan, taasna ay keenayso in waalidiinta ay meelo kale oo aanan la ogayn waxa la barayo ay la aadaan caruurtooda